नेपाली भुमिको चिन्ता गर्दै अरबसागरबाट प्रधानमन्त्रीलाई चिठी - Prawas Khabar
नेपाली भुमिको चिन्ता गर्दै अरबसागरबाट प्रधानमन्त्रीलाई चिठी
२६ जेठ २०७७, काठमाडौं ।
सरकारको लोगो निसाना छाप संसोधनका लागि विधेयक संसदमा अड्किएकोमा अरबबाट एक नेपाली युवाले आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको अवस्थामा एमसीसी भन्दा नेपाली माटोको रक्षा महत्वपूर्ण भएको भन्दै सामाजिक सन्जाल मार्फत सचेत गराएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ”
प्रधानमन्त्री ज्यु नमस्कार 🙏🙏
मैले तपाईंलाई नजिकबाट देखेको पनि छैन । भेटेको पनि छैन र ब्यक्तिगत कारणले भेट्न पनि नपरोस् भन्नेले जेसुकै भनुन । मैले त्यसलाई मतलब दिॅदैन । तर रास्ट्रियताको अडानमा तपाईले लिएको प्रतिबद्धता मुर्छित सपनाहरुलाई बिउॅझाउने जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो ईतिहासमा लेखिनेनै छ । अहिले कोरोनाको महामारी छ जनताले राम्रोसँग उपचार पाएका छैनन । कहिॅ रिपोर्ट लास जलाई सकेपछी कोरोना भएको भनेर पुष्टि हुन्छ भने भ्रष्टाचारका कुरा छ्याप्छ्यप्ती सुन्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईं दयालु हैन कठोर बन्नुपर्छ युट्युबे बुङ्गाहरु देखि पितपत्रकारिता गर्ने चाटुकारहरुले पनि जनतामा भ्रम फैलाई त्रासको बाताबरण शृजना गर्दै छन जसको लगाम लगाउन आवस्यक छ ।
यसै बिच सीमा बिबादलाई नै ओझेलमा पार्दै अहिले MCC एउटा् चर्को बहसको विषय बनेको छ MCC के हो मैले पढेको छैन त्यसैले अहिले यसलाई सहि वा गलत भनेर म भन्दिन तर अहिलेको आबस्यकता MCC भन्दा महत्त्वपूर्ण देशको माटोको विषय छ। देश कठिन परिस्थितिबाट गुज्रीरहेको छ । हिजोको सरकारले सम्झौता गरेको MCC अहिलेको सरकारले गरे जसरी उचाल्दै छन । ती उचाल्नेहरु तिनै हुन, जुन त्यतिबेला सरकारमा थिए ।तिनै मानिसहरु अहिले सम्झौता राष्ट्रघाती भनेर जनता भड्काउदै छन । जनतामा भ्रम छरेर आफ्नो स्वार्थलुट्न पल्किएका केही लेन्डुपे द्रोजेहरु तलुवा चाट्दै सरकार ढाल्नको लागि न्वारान देखिको बल लगाएर लागि परेका छन । यस्तो अबस्थामा जाबो MCC हामीलाई किन चाहियो ? यसलाई थाॅती राखिदिनुहोस् ।
भारत संगको सीमा बिबादबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्दै बिभिन्न स्वार्थ केन्द्रित जमातहरुको मुद्दा मिल्दैछ । त्यो भनेको सत्ता परिवर्तन र सीमाको बिषयमा हाम्रो आवाज कमजोर बनाउने मात्रै नभै आफ्नो हाकिमी राज्य स्थापित गराउन चाहान्छन् । जुन सीमाका बिषयमा एक शब्द बोल्न सक्दैनन, तिनै एमसीसीको बिषयमा उग्ररुपमा प्रस्तुत हुदैछन् ।
त्यसैले हाम्रो भुमी फिर्ता ल्याउन तपाईको आवश्यकता छ जनताले धेरै आसा अनि विश्वास गरेका छन् । हिजो भारतले नेपालको भुमिमा सडक बनाउॅदा ‘मौन समर्थन’ गर्नेहरुबाट देशले भुमी रक्षाको अपेक्षा गर्न सक्दैन । तसर्थ, अमेरिकालाई नचिड्याई एमसीसी केही समय थाॅती राखेर, नभए MCC लाई खारेज गरेर भए पनि सीमामा केन्द्रित हुनु आवस्यक छ । बरु प्रदेश सरकार हटाएर भएपनी नेपाली सेनामा भर्ती खुलाउनुहोस सेनालाई बोर्डरमा तैनाथ गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुुँदैन । हाम्रो देशको सान हाम्रो मान र मर्यदालाई कसैले ठेस पुर्याउने कार्य गर्छ भने त्यो कदापी स्विकार्य हुॅदैन । तसर्थ अहिले MCC हैन आफ्नो भुमिलाई रक्षागर्न प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस । दुईचार जना लेन्डुपे दोर्जे नेताहरु बाहेक सारा नेपाली जनता तपाईको साथमा छन् ।
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च ओमन द्वारा शाेक सभा सम्पन्न
रवीन्द्र–पत्नी विद्या राजनीतिमा आउने सम्भावना कति छ ?
भारतीय गायक सोनु निगम विरामी भएपछि नर्भिकमा
नेपाली जनसम्पर्क समिति ओमान द्वारा कोरोना संकट समाधान को लागि नेपाल सरकार लाई ।माग र सुझाव पत्र दिदै दुतावास को पहल प्रति खुशी ब्याक्त